मनोरन्जन | Kantipur TV HD
मधुशाला भन्नेबित्तिकै दिमागमा के आउँछ ?
अभिनेता राजेश हमाल जति सिरियस हुन्छन् उति धेरै रमाइलो पनि गर्छन् । झण्डैं ३ सय चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका हमाल अहिले केहि समयदेखी चलचित्रमा देखिएका छैनन्, उनि चाँडै चलचित्रमा देखिने चर्चा पनि आजभोली चलिरहेको छ । केहि समयअघि अभिनेता हमालसँग गरिएको निकै रमाइलो गफको सम्पादित अंश ।
जितु नेपालले जुराइदिएको राता मकै
ओ ड्राइभर सा’ब कति भयो पैसा ? तर यो दृश्य बिग्रियो । सुटिङ हेर्न आएका एक व्यक्तीका कारण विग्रिएको त्यो दृश्य फेरी खिच्न सुरु भयो । त्यसैबेला जितु नेपालले एउटा थेगो भनम न दाई भने उनलाई । उनले भनें, ‘जितुले ए राता मकै जोडेर यो संवाद बोल्नुस् न भने, मैले त्यहि बोल्दिएँ । टेलिभिजनबाट यो एपिसोड सार्वजनिक भएपछि राता रात हिट भैयो ।
विपीन कार्की भन्छन्, ‘सुरुवातमा काम गरेको पैसा पाइएन’
कामेश्वर चौरासिया, विपिन कार्की र नाजीर हुसेनमा धेरै कुरा समान छन् होला । यद्यपी धेरैले दुई कुरा सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् – उनिहरु अभिनेता हुन्, तिनैजना थियटरबाट चलचित्रमा हाम फालेका ।तिनै जना अब्बल अभिनय गर्ने कलाकार हुन् । चलचित्रको कुनै कमी छैन ।
पल शाहसँगको प्रेमबारे आँचलले मुख खोलिन्
हिरोइन भएपछि च्वाक भएर हिड्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सामान्य भएर हिड्न मन लाग्दैन ?नढाँटिकन भनम ? हिरोइन भएपनि नभएपनि घरमा बस्दा चिटिक्क भएर बस्ने बानी छ । सानैदेखी म घर होस् या बाहिर जाँदा, चिटिक्क परेर बस्ने भएकाले मलाई खासै फरक परेको छैन ।
जब उद्घोषकले आमा छोरी चिनेनन्
झरना थापा र सुहाना थापा आमा छोरी हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । उनिहरुले भ्रखरै नयाँ चलचित्र ए मेरो हजुर ३ सार्वजनिक गरे । चलचित्र राम्रो चलिरहेको छ ।
म च्वाँक छु जस्तो लाग्दैन : जसिता
चलचित्र लिलिबीली र लभ स्टेसनकी अभिनेत्री जसिता गुरुङको चर्चा यति धेरै बढ्यो की, कुनै स्थापित अभिनेत्रीको भन्दा कम छैन । थोरै चलचित्रबाटै धेरै चर्चा कमाएकी उनलाई लिएर का मगर्न खोज्ने निर्माताहरु निकै धेरै छन् । हालै मात्रै उनले ठुलो ब्यानरको एक चलचित्रमा पारिश्रमिकको कुरा नमिलेपछि छोडिदिएकी छिन् । जसिता चाडैं अर्को चलचित्रमा काम गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । उनै सुन्दर अभिनेत्री जसितासँग निकै रमाइलो कुराकानी गरिएको छ ।
मनिषा कोइरालाको जीवनीमा अभिनय गर्न चाहन्छु – नम्रता श्रेष्ठ
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ, नेपालको चलचित्र उद्योगकी निकै सुन्दर अनि लोकप्रिय अभिनेत्री हुन् । दमदार अभिनयका कारण बेग्लै छाप छाड्न सफल उनले अहिलेसम्म दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्, पछिल्लो चलचित्र प्रसाद निकै राम्रो चल्यो । अहिले उनि अर्को चलचित्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छिन् । उनको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको चलचित्र जाईरा आगामी भदौमा सार्वजनिक हुँदैछ ।
खोट्टाको पावर !
डिट्ठा साब समसामहिक ग्रामिण परिवेशमा निर्माण हुने ह्युमर टेलिश्रृखला हाे ! हरेक श्रृखला निर्माण हाँस्यव्यङग्यमा तयार गरिन्छ , डिट्ठा साब मात्र मनाेरञ्जनकाे लागि तयार गरिन्छ
क्युएफएक्स कसरी सफल भयो ?
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट नियमित रुपमा प्रशारण हुने चर्चित कार्यक्रम इट्स माइ शो मा यतिबेला चर्चित हल ब्यापारी नकिम उद्धिन उपस्थित भए । नेपालमा अत्याधुनिक हल संचालन गर्ने श्रेय उनैलाई जान्छ । क्युएफएक्स मल्टिप्लेक्सका प्रमुख समेत रहेका व्यवसायी तथा चलचित्र निर्माता उद्धिनले नेपालमा कसरी नयाँ डिजाइनको हल संचालनको सोच आयो, कसरी सफल हुन सकियो लगायत विभिन्न विषयमा गहकिलो भनाई राखेका छन् ।
फागु गीत जोगिरा अहिले लोप हुने अवस्थामा
वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्रीपञ्चमीदेखि फागु पूणिर्मासम्म तराईमा गाइने फागु गीत जोगिरा अहिले लोप हुन थालेको छ । तराईमा होली आउनु एक हप्ताअघिबाट सुनिने जोगिरा गीत विस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
महजोडी : जति बुझ्यो उति रहस्यमय
‘महजोडी’ नेपाली कला साहित्य क्षेत्रमा सर्वाधिक चिरपरिचित नाम हो । महजोडी कसरी नामाकरण गरियो, धेरैलाई थाहा छैन । मदनकृष्ण श्रेष्ठ को नामको पहिलो अक्षर म र हरिवंश आचार्य को नामबाट ह शव्द मिलेर मह बनेको हो । नेपाली कला साहित्यमा लामो बर्षदेखी निरन्तर सक्रिय उनिहरु कहिल्यै बिबादमा परेनन्, सबैको मन जिते । मह जोडी नेपाली कला क्षैत्र धेरैले आइडियल समेत बन्न सफल छन् ।